देजाभु क्लब तोडफोड: सञ्चालक हिरासतमा, डिजे मार्समेलो फाइभ स्टारमा – Etajakhabar
मंगलबार, कार्तिक ०६, २०७५ | Tuesday, Oct 23, 2018
काठमाडौँ । प्रहरीले दरबारमार्गस्थित देजाभु क्लब तोडफोडका क्रममा पक्राउ परेकाहरूले ठगी मुद्दाअन्तर्गत कारबाही भोग्ने भएका छन् । तोडफोडका मुख्य कारक डिजे भने काठमाडौंको तारे होटेलमा आराम गरिरहेका छन् । अमेरिकी डिजे (डस्को जक्की)का नाममा देजाभु सञ्चालक र इभेन्ट अर्गानाइजरले सर्वसाधारणसँग रकम संकलन गरेको पाइएपछि उनीहरूलाई ठगी मुद्दाअन्तर्गत कारबाही अघि बढाइएको हो । प्रहरीका अनुसार तोडफोडका क्रममा देजाभु सञ्चालक विशाल डाँगी, जयन श्रेष्ठ, मयक खड्का, मिलन श्रेष्ठ, पृथु बास्कोटा, राजीव महर्जन, आकाश न्यौपाने र रितेश मारबाडी पक्राउ परेका छन् । त्यसमध्ये मारबाडी र महर्जन इभेन्ट अर्गानाइजर हुन् । बाँकी सबै क्लब सञ्चालक हुन् । प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका बास्कोटा क्रिकेटका राष्ट्रिय खेलाडी हुन् ।
डिजे मार्समेलो होटेल द्वारिकाज्मा देजाभु क्लब तोडफोडका मुख्य कारक बनेका डिजे मर्समेलो अहिले बत्तीसपुतलीस्थित होटेल द्वारिकाज्मा आरम गरिरहेको खुलेको छ । क्लबको कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी मंगलबार काठमाडौं उत्रिएका थिए । त्यसपछि उनलाई होटेल द्वारिकाज्मा बस्ने प्रबन्ध मिलाइएको थियो ।
खानपान नमिलेपछि उनी अचानक बिरामी परेको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीका अनुसार डिजे मार्समेलो बिरामी भएपछि क्बलमा उपस्थित हुन नसेको खुलेको छ । डिएसपी केसीले भने, ‘डिजे मार्समेलोसँग पनि हामीले भेट्यौँ । ऊ बिरामी नै भएको खुल्यो । चिकित्सकको सल्लाहपछि उनी अहिले होटेलमा आराम गरिरहेका छन् ।’ आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
यसरी भयो तोडफोड डिजे मार्समेलोलाई देजाभुले महँगो मूल्यमा काठमाडौं उतारेको थियो । सोहीअनुसार इभेन्ट अर्गानाइजरले सर्वसाधारणसँग टिकट बिक्री गरेको थियो । योजनाअनुसार डिजे मार्समेलो बुधबार रातको १० बजे क्बल आउने भनियो । सोहीअनुसार क्लबमा दर्शक जम्मा गरियो । तर, निर्धारित समयमा उनी उपस्थित हुन सकेनन् । अर्गनाइजरले डिजेलाई सम्पर्क गरे । उनी फुड पोइजनका कारण बिरामी परेको खुल्यो । अर्गानाइजरले त्यो विषय दर्शकलाई बताएनन् । उनीहरूले दर्शकलाई डिजे ११ बजे आउने जानकारी दिए । तर, ११ बजे पनि उनलाई उपस्थित गराउन सकेनन् । पछि १२ बजे आउने भनियो । त्यसवेला पनि उपस्थित गराउन सकेनन् । तीव्र प्रतीक्षामा बसेका दर्शकलाई रातको १ बजे अर्गनाइजरले डिजे आउन नसक्ने जानकारी गराए । त्यसपछि दर्शक उत्तेजित बने । क्लबका बाउन्सरले रोक्न खोजे । तर, उनीहरूको केही चलेन । अन्ततः देजाभुमा बिहानको ३ बजेसम्म तोडफोड मच्चियो र पूर्ण रूपमा ध्वस्त बन्यो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २९, २०७४ समय: ९:५२:५१
चर्चित अभिनेता प्रभासको जन्मदिनमा यस्तो भिडियो रिलिज , यसपटक ‘बाहुबली’ घोडामा होइन बाइकमा देखिँदै (भिडियो)
बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री मलाइका अरोरा ‘मुन्नी’को आज जन्मदिन , अझै छिन यस्ती हट
आयो यस बर्षकै लागि सबै भन्दा उत्कृष्ट र सबैलाई छमछमी नाचाऊने पूर्णकला बिसीले भट्टाएको देउसी भैलो गीत आयो बजारमा (भिडियोसहित)
पल शाह बने महंगो पारिश्रमिक लिने नायक , पारिश्रमिक सुन्दा पर्नुहुनेछ दँग
बलिउड स्टार रणवीर सिंह र दीपिका पादुकोणको बिहेमा यी चर्चित बलिउड स्टार सहभागी हुने
चर्चित अभिनेत्री करिना कपुर छोराकी आमा भएपनि देखिइन यस्तो सेक्सी ड्रेसमा (हेर्नुहोस् तस्वीर)
नायिका दीपिका पादुकोणको रणविरसँग बिहे नहुँदै दीपिका र उनकी हुनेवाली नन्द सोनमबीच भयो यस्तो झगडा
संस्कारी बुहारी इच्छाको यस्तो हट बोल्ड तस्वीर (फोटोफिचर)
चीनले विश्वलाई चकित पार्दै ९ वर्षमा बनायो समुद्रमुनि टनेलसहितको ५५ किलोमिटर लामो पुल (तस्बिर सहित)
#171222 (loading title)
बर्खास्त नै हुने भएपछि एसपी बिष्टले खोले डरलाग्दो रहस्य ! आखिर कसरी हुन गयो यस्तो ? (भिडियो सहित)
परपुरुषसँग दिउसै अश्लिल हर्कत गरेकी बुहारीलाई सासु ससुराले देखेपछि कोठामा थुरेर राखे
अनु मलिकमाथि यौन उत्पीडनको आरोप : उनले मेरो स्कर्ट उठाउन शुरु गरे र आफ्नो पाइन्ट उतारे
यो हो नाङ्गै खाना खाने रेष्टुरेन्ट ! रेष्टुरेन्टका कर्मचारीले पनि नांगै सेवा दिन्छन्
नायिका रेखा थापा र नायिका प्रियंका कार्की बीच भयानक युद्ध हुदै कार्तिक १६मा कसले मार्ला बाजी ?यस्तो छ खास बास्तबिकता (भिडियो)
संसारले चिनेका यी नेपाली युवाको भिडियो : नेपाली इमान्दार हुन्छ भन्ने जल्दो उदाहरण दिएर नेपाल र नेपालीको शिर उच्च बनाएका यी नपाली युवा, सवैले हेर्नुहोला..साथै सेयर पनि गर्दिनुहोला (भिडियो सहित)
पूजाले नयाँ फिल्मका लागि रोजिन् तिब्बतियन हिरो, फिल्ममा नआउदै सुपरस्टार छन् यी हिरो (भिडियो सहित)
पृथ्वी राजमार्गमा दुर्घटना घटाउन पहिलो पटक रबरको स्पीड ब्रेकर
मादकपदार्थ सेवन गरेर सर्वसाधारणलाई कुटेको आरोपमा वडाध्यक्षविरुद्ध सार्वजनिक मुद्दा
पत्रकारमाथि एक महिलाले गरिन तेजाब प्रहार
नेपाल आइडलका रबि ओड पहिलो पटक परिवार सहित मिडियामा, हेर्नुहोस् किन भयो रबि को घरमा रुवाबासी (भिडियो)